यहोवाका साक्षीहरू कस्ता मानिस हुन्‌?
परमेश्वरको इच्छा के हो?
हामीलाई किन यहोवाका साक्षी भनिन्छ?
बाइबल सत्य फेरि कसरी पत्ता लगाइयो?
नयाँ संसार अनुवाद-को आवश्यकता किन पऱ्यो?
हाम्रा ख्रीष्टियन सभाहरूमा तपाईंले कस्तो अनुभव गर्नुहुनेछ?
सङ्‌गी ख्रीष्टियनहरूसँगको सङ्‌गतिबाट हामीलाई कस्तो फाइदा हुन्छ?
हाम्रा सभाहरूमा कस्ता कार्यक्रम हुन्छन्‌?
हामी किन सुकिलो लुगा लगाएर अनि चिटिक्क परेर सभामा जान्छौं?
सभाको लागि तयारी गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका के हो?
पारिवारिक उपासना भनेको के हो?
हामी किन ठूलठूला जमघटमा उपस्थित हुन्छौं?
हाम्रो प्रचारकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ?
अग्रगामी कसलाई भनिन्छ?
अग्रगामीहरूको लागि कस्तो तालिम उपलब्ध छ?
एल्डरहरूले मण्डलीको लागि के-के गर्छन्‌?
सहायक सेवकहरूले के-के गर्छन्‌?
क्षेत्रीय निरीक्षकहरू हामीलाई कसरी मदत गर्छन्‌?
सङ्‌कष्टमा परेका भाइबहिनीलाई हामी कसरी मदत गर्छौं?
विश्वासी र बुद्धिमान्‌ दास को हो?
अहिले परिचालक निकायले कसरी काम गर्छ?
बेथेल भनेको के हो?
शाखा कार्यालयमा कस्तो काम गरिन्छ?
हाम्रा लेखहरू लेख्ने र अनुवाद गर्ने काम कसरी हुन्छ?
हाम्रो विश्वव्यापी कार्यको लागि खर्च कसरी जुटाइन्छ?
हामी किन राज्यभवन निर्माण गर्छौं? अनि कसरी गर्छौं?
राज्यभवनको मर्मतसम्भार गर्न हामी कसरी सघाउन सक्छौं?
राज्यभवनमा भएको पुस्तकालयको हामी कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौं?
हाम्रो वेबसाइटमा कस्ता-कस्ता जानकारी उपलब्ध छन्‌?
के तपाईं यहोवाको इच्छाअनुसार चल्न चाहनुहुन्छ?
अमेरिकी साङ्केतिक भाषा
अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा
इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा
इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा
एङ्गोलन साङ्केतिक भाषा
ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका)
कुइचुआ (सान्टिआगो डेल एस्टेरो)
कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्)
कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा
कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा
ग्रीक साङ्केतिक भाषा
घानायन साँकेतिक भाषा
चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत)
चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल)
चिनियाँ साङ्केतिक भाषा
चिली साङ्केतिक भाषा
जर्मन साङ्केतिक भाषा
जापानी साङ्केतिक भाषा
जिम्बावे साङ्केतिक भाषा
डच साङ्केतिक भाषा
नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला)
पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा
पेरुभियन साङ्केतिक भाषा
फिनिश साङ्केतिक भाषा
फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा
फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा
बिसाउ गिनियन क्रिओल
बोलिभियन साङ्केतिक भाषा
ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा
भारतीय साङ्केतिक भाषा
भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा
मलेसियन साङ्केतिक भाषा
मार्क्युसियन (नुकू हिभा)
मार्क्युसियन (हिभा ओ)
रूसी साङ्केतिक भाषा
रोमानी (उत्तरी ग्रिस)
रोमानी (दक्षिणी ग्रिस)
रोमानी (पूर्वी स्लोभाकिया)
रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक
वास्टेक (सान लुइस पोटोसी)
सोलोमन टापु पिजिन
स्लोभाक साङ्केतिक भाषा
हंगेरियन साङ्केतिक भाषा
होण्डुरस साङ्केतिक भाषा
आज यहोवाको इच्छाअनुसार चल्नेहरू को हुन्‌?
तपाईं कति जना यहोवाका साक्षीलाई चिन्नुहुन्छ? हामीमध्ये कोही तपाईंको छिमेकी, सहकर्मी वा सहपाठी हौंला। हामीले तपाईंसित बाइबलबारे छलफल पनि गरेका छौं होला। हामी वास्तवमा को हौं अनि किन आफ्नो विश्वासबारे अरू मानिसहरूलाई बताउँछौं?
हामी तपाईंजस्तै साधारण मानिस हौं। हाम्रो सामाजिक अवस्था र पृष्ठभूमि भिन्नाभिन्नै छ। हामीमध्ये कोही-कोही पहिले अर्कै धर्म मान्थ्यौं भने कोहीलाई चाहिं भगवान्‌मा विश्वासै थिएन। तर यहोवाको साक्षी हुनुभन्दा अगाडि हामीले बाइबलको शिक्षा होसियारीसाथ जाँच्न समय निकाल्यौं। (प्रेषित १७:११) आफूले सिकेको कुरा साँचो रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौं। त्यसपछि अरू कसैको करकापले होइन तर आफै उत्प्रेरित भएर यहोवाको उपासना गर्ने निर्णय गऱ्यौं।
हामी बाइबल अध्ययनबाट लाभ उठाउँछौं। अरू सबैको जस्तै हाम्रो पनि आ-आफ्नै समस्या र कमी-कमजोरीहरू छन्‌। तर बाइबलमा दिइएका सिद्धान्तहरू दिनहुँ लागू गर्ने कोसिस गर्दा आफ्नो जीवनमा राम्रा परिवर्तनहरू आएको हामीले अनुभव गरेका छौं। (भजन १२८:१, २) आफूले बाइबलबाट सिकेका राम्रा कुराहरू हामीले अरूलाई बताउनुको एउटा कारण यही हो।
हामी परमेश्वरले तोक्नुभएको स्तरअनुरूप जिउँछौं। बाइबलमा दिइएको स्तरअनुरूप जीवन बिताउँदा हाम्रो हित हुन्छ। साथै यसले अरूको आदर गर्न अनि इमानदार र दयालु हुन पनि सिकाउँछ। यसले मानिसहरूलाई शारीरिक र मानसिक तवरमा स्वस्थ रहन र समाजमा योगदान पुऱ्याउनुका साथै परिवारमा एकता कायम गर्न मदत गर्छ। साथै यसले नैतिक स्वच्छता विकास गर्न पनि मदत दिन्छ। “परमेश्वर पक्षपाती हुनुहुन्न” भनेर हामी विश्वस्त छौं। हामी जातीय अनि राजनैतिक भेदभाव नभएको अन्तरराष्ट्रिय परिवारका सदस्य हौं। हामी व्यक्ति-व्यक्तिको हिसाबले साधारण मानिस हौं तर समूहको रूपमा भने हाम्रो विशेष चिनारी छ।—प्रेषित ४:१३; १०:३४, ३५.
यहोवाका साक्षीहरू र अरू मानिसबीच के समानता छ?
यहोवाका साक्षीहरूले बाइबल अध्ययन गरेर कस्ता राम्रा कुराहरू सिकेका छन्‌?
अझ बढी सिक्नुहोस्
परमेश्वरलाई मन पर्ने तरिकामा जीवन बिताउनुहोस्
परमेश्वरलाई मन पर्ने तरिकामा जीवन बिताउन सम्भव छ। वास्तवमा हामी उहाँको साथी बन्न सक्छौं।
परमेश्वरले स्वीकार्नुहुने उपासना
साँचो धर्म मान्नेहरू को हुन्‌, तिनीहरूलाई चिनाउने छ वटा विशेषता विचार गर्नुहोस्।
अडियो रेकर्डिङ डाउनलोडका विकल्पहरू
| गोपनीयता नीति